UZuma uthi akayi ezikhindini - Ilanga News
Home Izindaba UZuma uthi akayi ezikhindini
UZuma uthi akayi ezikhindini
Uveze nokuthi akazukulubhada kwikhomishana kaMehluleli Raymond Zondo
UTSHELE abalandeli bakhe ukuthi akazimisele nje ngokuboshelwa into angayenzanga uMnu Jacob Gedleyihlekisa Zuma.
UTSHELE abala-ndeli bakhe abebengangoZulu eya eMa-kheni ukuthi akalubhadi esi-gcawini sikaMehluleli Raymo-nd Zondo esiphenya ngokuqhwa-gwa kwamandla ombuso yidlanzana, uMnu Jacob Zuma owayengu-mengameli waseNingizimu Afrika, ngesikhathi ekhuluma nabo ese-mzini wakhe KwaDakwadunuse, eNkandla izolo ngeSonto.
Ubatshele ukuthi usengamane afe efela amalungelo akhe, wathi akukuningi akufunayo, ufuna ku-ngabikhona abaphazamisa inkulu-leko namalungelo akhe awalwela waze wayodonsa ejele. Uthe ukhe-the ukubatshela ukuthi kufikwe ka-njani lapho sekukhona njengoba ngokwesinqumo ebesikhishwe
yiNkantolo yoMthe-thosisekelo, beku-mele ngabe uzinikele emaphoyiseni izolo ngeSonto emu-va kokugwetshwa izinyanga eziwu-15 edonsa ejele ngoku-delela inkantolo.
Sekuwumlando ukuthi ubuyele enkantolo wayocela ukuba lubhekisiswe kabusha lolu daba.
“Kangiqali uku-khononda ngejaji ngoba ngisaba ukuthi lizokwenzelela ekuthatheni kwalo isinqumo. Sengake ngakhipha amajaji amabili mina ngi-bhekene namacala, ngoba nakhona ngisaba ukuthi angase agcine enzelela.
“Leli jaji lihlulwa yini-ke lona ukusuka, ikhomishana ye-ngamelwe ngomunye umuntu?” kubuza uMnu Zuma egigiyela uMnu Zondo ongusihlalo wesigcawu esiphenya ngokuqhwa-gwa kwamandla ombuso yidlanzana. Ufunge wagomela wathi uma kusenguMnu Zondo ohola lesi si-gcawu, akalubhadi lapho. Uthe okunye obekumxaka wukuthi ngo-kwemithetho yesigcawu, abantu abasuke bebizwe ukuyokwethula ubufakazi bavumelekile ukuthi uma bengafuni ukuphendula imi-buzo bangayiphenduli.
“Uma sekufanele kuyovela uZu-ma, sekuthiwa kuzofanele aphe-ndule yonke imibuzo ebuziwe, ka-njani nje?” kuqhuba yena.
Ukhulume phambi kwezinkumbi zabalandeli bakhe abaqale ukuthe-leka maphakathi nesonto, okuthe ngoLwesihlanu nangoMgqibelo za-khula izibalo. Ngemuva kwesimemezelo esikhishwe ngoMgqibelo so-kuthi inkantolo iyamvumela ukuba ayofaka incwadi yesicelo sokubhe-kisiswa kwesigwebo sakhe, kube sekuvela ukuthi usazoke angayi ekhulukuthu.
“Sebesinikile usuku okumele abammeli bami bayovela ngalo enkantolo, lapho siyochitha khona lesi sigwebo enginikezwe sona. Kuyinkinga-ke ukuthi umthetho wakuleli usezandleni zabathile,” kusho yena.
Uphinde walibeka ngembaba elokuthi uma nje esaboshelwa into angayazi, akalubhadi ejele, kungamane kume izwe impela.
“Ngiyabonga ukungeseka no-kunginika kwenu isibindi. Sengi-bonile futhi ukuthi uma ngineca-la engilenzile ngeke ningeseke ngoba niyongitshela nje ukuthi nginephutha, nakhona lapho ngiyoya ejele ngiyodonsa ngoba ngiyobe nginecala. Sengibonile fu-thi ukuthi ngeke nani nivume ukuthi ngiboshelwe into engingayenza-nga,” kusho yena.
Ubonge abammeli bakhe phaka-thi kwabo okukhona no-Adv Dali Mpofu – owake waba ngusihlalo
we-EFF – wathi wukusebenza kwa-bo kanzima okwenze waqhubeka nokulala embhedeni wakhe ngoba ukube kuya ngabathile, ngabe kwa-yizolo ulale ebaliwe.
Phakathi kwabebekhona abebeyokhombisa ukumeseka, kubalwa amalungu e-ANC aqavile, okungu-Mnu Tony Yengeni, uMnu Mzwa-ndile Masina oyimeya yaseKurhuleni noMnu Ace Magashule ongunobhala-jikelele we-ANC osamisiwe.
Indodana yakhe, uMnu Duduzani Zuma beyilokhu ibonakala ihamba nabantu. Ngaphambi kokuba uMnu Zuma akhulume nabalandeli ba-khe, usuku lwayizolo luqale kuphithizela ekuseni ngaphandle komuzi wakhe njengoba kuke kwaqhuma izibhamu, kwangaqondakala ukuthi kwenzekani.
Kuphinde kwaba nesimo lapho amanye amalungu e-ANC abevela ezindaweni ezahlukene evalelwe ngamaphoyisa engakafiki emzini kaMnu Zuma, kodwa agcina ngoku-badlulisa, kwathiwa mabayopaka esikoleni esiseduze nomuzi kaMnu Zuma baye khona ngezinyawo.
Abanye bekubukeka sengathi imigomo yokuzivikela kwiCoronavirus yihlaya kubona njengoba izifonyo bezingabonwa. Eyokuqhelela-na ibingangenwa.
* Bheka ekhasini 10,11 no-12
Previous articleUfanise uZuma noNkulunkulu
Next articleKukhalwa ‘ngendelelo’ kaMgiliji